DHIRTA SERBIAN: SHARAX, KU HABOON IYO DARYEEL - DHIRTA DHAADHEER
Mid ka mid ah fursadaha ugu wanaagsan ee qurxinta xagaaga xagaaga waa xabbad serif ah. Waxay soo jiidataa iibsadayaasha ma aha oo kaliya astaamaha dibedda, laakiin sidoo kale waxay u adkeysiga, iyo sidoo kale sahlan daryeelka. Laakiin miyay kuwan uugu filan si ay uga baxaan dhammaan musharrixiinta kale?
Suugaanta Serbiga ah, oo magaciisa cilmi ahaan loo yaqaan 'picea omorika', wuxuu matalaa qoyska Pine. Serbia waxaa loo tixgeliyaa halka uu ku dhashay ee geedka.
Ma taqaanaa? Boorashka Serbian waxaa markii ugu horreysay lagu ogaaday Joseph Pancic 1875.
Heerka dhirta noocan ah waa celcelis ahaan 15-20 meter. Waxaa jira waxyaabo ka reeban marka uu dhirta korayo iyo 50 mitir. Baaxadda dhuxusha - 3-4 mitir, iyo dhexroorka jirridda kama badna calaamadda 1 mitir. Kobaca sanadlaha ah ee geedku waa ilaa 35 cm oo dherer ah iyo ilaa 15 cm oo ballac ah. Da '- qiyaastii 300 sano. Cones waa bilowga mugdi madow, laakiin ka dib markii koriinkeedu u beddelaa midab madow, 4-7 cm dheer. Muddada Bisaylku waa August. Noocyada noocan oo kale ah waa mid u adkaysata cagaarka, dabaysha, hooska, qiiqa, cudurrada iyo dhammaan cayayaanka. Laakiin dhibicda daciifka ah waxay u nugul tahay duullaanka caarada caarada iyo aphids.
Marka aad dooranaysid warshad caleenta ah oo ku taala goobta, yew, juniper, larch, geed, qoryaha, araucaria, kedib kedar, foxtail iwm, cypress, cryptomeria, kedar, thuja waa in loo tixgeliyaa dhaw.
Guud ahaan, waxaa jira 16 nooc oo ah dhirta Serbian ah ee dabiiciga ah. Kuwa ugu caansan waa "Karel", "Nana", "Pendula". Wixii ku saabsan si kasta.
Dhirta Serbian "Karel" waxay ku kala duwan yihiin kuwa kale ee cabbirkoodu yar yahay iyo heerka sare ee caabuqa barafka. Heerkulka heerkulka la ogol yahay wuxuu ka jiraa -23 ilaa 29 darajo Celsius. Dhirta dhirta qaangaarku way kala duwan tahay inta u dhaxaysa 60-80 cm, dhexroorka taajka waa ilaa 1.2 m. Qiyaasta koritaanka sanadlaha waa 7 cm. Sharaxaad ka mid ah dhirta Serbian "Nana" wax yar ka duwan kii hore. Dhammaan cabbirada cirifka isku midka ah (100-120 cm), caabbinta barafowga (heerkulkoodu waa -34 ilaa iyo 40 darajo) iyo kobaca sanadlaha (7-10 cm). Cardinal ahaan, "Nana" waxay ka duwan tahay "Karela" iyada oo la qabsanaayo nooca carrada iyo hawada. Sidaa daraadeed, waa noocan geed oo loo isticmaalo magaalooyinka waawayn ee qurxinta. Serbian Pendula Spruce Inta badan waxaa loo isticmaalaa naqshadeynta beeraha kala duwan, beeraha, guryaha, iwm. Dalabkaas "Pendulu" waxaa u sabab ah jiritaanka cufan, taas oo keenaysa asalka geedka iyo xurmada. Dhererka ayaa gaari kara 10 mitir. Dhererka ayaa aad u cufan, sidaas darteed dhexdhexaadkoodu waa yar yahay - kaliya 1.5 m. "Pendula", sida duufaanta kor lagu sharaxay, waxay leedahay heer fiican oo ah caabbinta barafka.
Waa muhiim! Si dhexda dhejis ah ee dhirtaada ma ahan mid qaloocsan, waxaad u baahan tahay inaad xirto.
Uma baahnid in aad madaxaaga nacastaada u doorato adigoo dooranaya meeshii uu ku dhajin lahaa dhirta Serbian ku haboon xaalad kasta. Waxyaabaha laga reebo waxaa ka mid ah salinees ama carrada qallalan. Waxay keeni karaan cirbadaha irbadaha. Xaqiiqo ahaan waa mid aan loo dulqaadan karin doorasho ka dhaxaysa dhul iyo hareer. Sida loo waraabiyo, xagaaga ee hal geed ah waxay qaadan kartaa 20 litir oo biyo ah toddobaadkii.
Haddii ciidda ay acidic tahay, ka hor intaan la beeri waa inay ahaato nuurad, oo haddii ay tahay mid aad u dabacsan ama aad u culus, waa in lagu qasi karaa dhoobo ama ciid. Sidoo kale, ciidda waa inaysan ku jirin haraaga burburka ama waxyaabaha laga yaabo inay caqabad ku noqoto koritaanka geed.
Ugu horeyn waxaad u baahan tahay inaad qodo dalool dalagaad ah oo qiyaastii 60 sentimitir qoto dheer. Dhexdhexaadkani waa inuu yahay 40-60 cm, iyo dhexroorka hoose - 30-50 cm Si loo beero kooxda, masaafada u dhaxaysa cayayaanka waa in ay ahaataa 0.5-1 m.Haddii aan ka hadleyno dhirta qiyaasta dhexdhexaadka ah, markaa dhexdhexaadku wuxuu kudhowaad yahay 3-5 mitir iyo haddii ay weyn tahay, waa 5 mitir. Haddii dhulka uu culus yahay ama biyaha carrada ay sareeyaan, dheecaanku waa in lagu dhejiyaa hoosta ceelka. Waxay ka kooban tahay dhagax la jajabiyey ama lebbaal jabay oo lakabka lakabka ah ee qosolkoodu yahay 15-20 cm oo dherer ah, ka dibna, si koritaanka geedku u noqdo mid waxtar leh oo dhakhso badan, waa lagama maarmaan in la diyaariyo isku dar ah ciidda. Tani waxay u baahan tahay peat, humus, ciid iyo bacriminta "Nitroammofoska." Isku daridkan waxaa lagu shubay godka sare ee lakabka dheecaan ka dibna ku shubay 5 litir oo biyo ah.
Waxaan si toos ah u jeedinaynaa beerto ee seedling. Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay si aad u hesho warshad ka soo samayso weelka. Waa lagama maarmaan in nidaamka xididka geedka cunay buro dhulka. Haddii kale, geedka badanaa waxyeello ayuu u geysanayaa ama maahan in uu xidid ku yeesho. Waa lagama maarmaan in la dhigo seedling daloolka sida habka jirku u yahay mid toosan oo qoorta dhabta ahna aan la marsiin dhulka. Fikrad ahaan, waa in ay ahaato mid deg deg ah dhulka. Adigoo dhajinaya warshadda sida ku qoran tilmaamaha, waxaad ku dabooli kartaa dhulka oo si khafiif ah u tamp.
Markaad sameysatid shaqada ugu weyn, waxa kaliya oo ay ku sii jirtaa biyaha geedka. Qiyaasaha biyaha waxay ku xiran yihiin cabbirka geedka. Haddii ay lagama maarmaan noqoto, seedling waa la xirxiraa laba xawaare. Ha iloobin in waqtiga ugu wanaagsan ee abuuridda dabka uu yahay dayrta (horraantii Sebtembar) iyo guga (dabayaaqadii Abriil).
Ma taqaanaa? Dheriga ugu da'da weyn adduunka waa Iran. Da'deedu waa afar kun oo sano.
Daryeelidda dhirta waxay leedahay dhowr dhibcood, waafaqsanaanta taas oo ka ilaalinaysa dhirtaada dhammaan noocyada xanuunka. Waxaa intaa dheer, kaniiniga noocaas ahi faa'iido iyo hoos u dhigista tirada walwalka mustaqbalka.
Waraabinta, dabacsan, mulching
Xilliga xagaaga, biyaha waa in la waraabiyaa toddobaadkii hal mar, iyagoo isticmaalaya 10-20 litir oo biyo ah, iyadoo ku xiran cabbirka.
Haddii dhirta ay yar tahay, ka dibna waxaa lagama maarmaan ah in la dabciyo ciidda oo aan qoto dheerayn 7 cm.
Dhirta yar yar waxay u baahan yihiin mulching. 5 sentimitir ee peat ama balka dhoobada ayaa beddeli doona daawooyinka macdanta sanadka oo dhan.
Waxaa jira 2 nooc oo kala ah: qurxinta iyo nadaafadda. Xaaladda kowaad, manjooyin waa in la sameeyaa isla markiiba ka dib markii laga beerto. Sidaa darteed, waxaad awoodi doontaa inaad sameysid nidaamka tufaaxa iyo nidaamka xidid isku mid ah. Noocida noocan ah waxaa ugu fiican guga, sababtoo ah haddii aad tan sameyso inta lagu jiro xilliga sii kordhaya (xilliga sanadka marka uu geedku kobcayo iyo horumarayo), waxaa jira halis weyn oo ah in dhirta loo kala qaado cudurro kala duwan.
Waa muhiim! Ha jarin madaxa sare. Waxa kaliya oo ka soo baxa dhirta.
Nooca labaad ee dhirta geedka ah waa caafi. Badanaa waxaa la heli karaa haddii laamaha:
hoos u dhigay.
Manjooyin nadiif ah ayaa la oggol yahay wakhti kasta sanadka.
Habka ugu haboon ee loo samayn karo nooc kasta oo ah manjooyin waxaa weheliya caawinta maqasyada gaarka ah ama gacanta lagu arkay. Qalabkani wuxuu kaa caawin doonaa inaad abuurto qaybta ugu muhiimsan, sababtoo ah kiisaska khafiifka ah oo aan sax ahayn waxaa jira halis weyn oo ah inay qaadaan infakshanka.
Tallaabooyinka ka hortagga cudurrada iyo cayayaanka
Sida hore loo xusay, cadowga ugu weyn ee geedaha Serbians waa aphids iyo caarada caarada.
Wixii ka hortagga ee cayayaan marka hore, ku xoqin leh saliidda potash ama fusions ee dhirta insecticidal waxaa lagu talinayaa. Mid ka mid ah kuwan waa basasha. Si aad u diyaariso faleebo waxay u baahan tahay 200 g oo keliya. Waa in lagu meeleeyaa 10 litir oo biyo diirran ah halkaasna waxaa lagu hayaa 4-5 maalmood, ka dibna la sifeeyaa. Ku buufi warshadda dareeraha 3 jeer 5 maalmood.
Cayayaanka dhaadheer ayaa soo baxaya haddii ay dhacdo in ay ku fashilmeen inay daryeelaan dhirta. Habka ugu muhiimsan ee looga hortago dulqaadkani waa in laga fogaado abaarta sii dheer. Xeeladaha kale ee ka hortagga waa in la ogaadaa ugu waxtarka badan: ku buufin leh baaruud kolloid ah ama faleebo toon. Diyaarso faleebadani waa mid sahlan. Waxyaabaha loo baahan yahay:
laanta litir ee ilkaha;
0.5 litir oo saliid ah oo la safeeyey;
30 ml saabuunta dareeraha ah.
Waxaan ilkaha ka soo qaadnaa weelka qashinkana iska tuuraa. Isku darkaas dib ugu soo laabo weelka ku shub saliidda cuntada. Isku day in aad ku adkaysato hal maalin. Ka hor inta aanad ku buufin, waxaan leexinaynaa tincture ee biyaha leh kala soocidda soo socda: 2 qaado oo ah faleebo halkii 0.5 l oo biyo ah. Waxay ku sii jirtaa oo keliya inaad ku darto saabuunta dareeraha ah, ruxin - oo waad samaysay!
Si uu dhirtu u sii socoto sidii ay ahayd jiilaalka ka dib, waxaad u baahan tahay inaad raacdo xeerar dhowr ah.
First of dhan, waxaad u baahan tahay si aad u siiyaan geed leh qadar ballaaran oo qoyaan, kaas oo ka caawin doona jiilaalka. Tani waa in la sameeyaa ka hor bilawga ah ee dhaxan daran, oo ah, dhammaadka November. Haddii dhirku yar yahay, 2-3 baaldiyo oo biyo ah ayaa ku filan. Xaaladda ka soo horjeeda, haddii dhirtaadu gaadho dhowr mitir / mitir oo mitir, mugga biyaha waa inaanu ka yaraan 5 baaldiyo.
Marka labaad, ka dib baraf xoog leh, waxaa lagu talinayaa in la nadiifiyo laamihii barafka.
Waa muhiim! Marnaba uma baahnid inaad tan sameyso adiga oo gariiraya ama laamaha laftooda.
Qalab ahaan, waxaad isticmaali kartaa xaaqin ama buraash gaar ah. Waxaa lagama maarmaan ah in la nadiifiyo jihada laga bilaabo talooyinka laanta illaa gadaal.
Laakiin waxaa jira dhibaato kale, oo la mid ah barafka, - roobka qabooba. Tan iyo markii la jeexjeexo dhibcaha si loo ciribtiro laantu ma shaqeyn doonto, waxay u baahan yihiin inay xiraan. Waqti ka dib, barafku wuu dhalaalayaa, taajuhuna uma baahnaan doonaan taageero.
Marka seddexaad, xitaa xilliga jiilaalka waxaad u baahan tahay inaad iska ilaaliso gubashada. Badiyaa sida buuq ayaa dhacaya bisha Febraayo, inta lagu jiro xilliga firaaqada. Si looga hortago, waa lagama maarmaan in la daboolo firfircoonida la xakameynayo oo ku duub dhar. Sidaa darteed, taajuhu ma kululaan doono, sidaa daraadeed, qalaji. Laakiin waa inaadan daboolin gabi ahaanba dusha sare ee geedka: waa inaad ka tagtaa meelo yaryar ah, oo haddii dhirku aad u weyn yahay, markaa waxaad u baahan tahay inaad xirto kaliya qaybta koonfureed.
Daadi waa hub halis ah oo ka mid ah arsenal ee naqshadeeyaha muuqaalka. Geed sax ah oo la doorto oo la gooyo waxay awood u leedahay inay bedesho qayb joogto ah, dhexdhexaad ah si loo dhamaystiro aqoonsi la'aanta! Dhammaan faahfaahinta isku dhafka oo dhan waxay noqon kartaa xirfadle, laakiin talooyinka soo socda waxay noqon doonaan mid xiiso leh qofkasta oo aan ka reeban.
1. Dabeysha Serbian ah waxay u muuqataa iftiinka ugu fiican oo kaliya sida maaddo. Si aad u xoojiso dhammaan qaababka quruxda badan ee cawska dhaadheer.
2. Duufaantu waa ikhtiyaarka ugu haboon ee dabeecada iyo dadka daalanaya qaraaska iyo dhexdhexaadinta qashinka caadiga ah. Waxaan rajeyneynaa in maqaalkani uu kaa caawiyey inaad soo bandhigto dareenka beerashada iyo ka tagista jiilka Serbianka ah, wax ka barto dhammaan khayraadka iyo qasaaraha geedkaan. Hadda waxaad si kalsooni leh u bixin kartaa jawaabta su'aasha ah in ay ku habboon tahay in lagu beeray deyrkaaga.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Dhirta dhaadheer 2019